Ny fiantraikan'ny sôsio-ekonomika amin'ny fanamafisana ny ranomasim-be | Reef Resilience
Ny fiantraikan'ny tontolo iainana eo amin'ny fanamafisana ny ranomasina amin'ny tontolo voajanahary dia tsy takatra tsara. Noho izany, sarotra ny maminavina ny fiantraikan'ny ranomasimbe ny fiarahan'ny olona. Satria ny fanamorana ny fiantraikany amin'ny rafitra fototra mifandraika amin'ny rafitra manontolo sy ny asan'ny tontolo iainana an-dranomasina dia mety hisy fiantraikany manan-danja ho an'ny ranomasimben'ny ho avy sy ireo olona an'arivony maro miankina amin'ny harena an-dranomasina ho an'ny sakafo sy ny fivelomany.
Fivarotana ara-barotra sy ara-pananahana
Ambony: Fitaovana vaovao. Sary © Gerick Bergsma 2011 / Marine Photobank. Ambany: Big Giant Clam (Tridacna maxima) any Aostralia. Sary © Chuck Savall 2012
Raha ny fanamafisana ny ranomasimbe dia misy fiantraikany amin'ny fahafahan'ny zavamaniry an-dranomasina hamorona siramamy sy skeleta, dia mety hampihena ny habetsaky ny karazan-javamaniry misy karazan-javamaniry mahazatra toy ny clams, oysters, ary ny urchins ny ranomasina. Izany dia misy fiantraikany amin'ny fiarahamonina olombelona miankina amin'ireo loharanom-bola ireo ho an'ny sakafo sy / na fivelomana. ref
Ankoatr'izany dia mety hisy fiantraikany eo amin'ny fanambanin'ny sakafo an-dranomasina ny fanasiana ary hitondra fiovana goavana amin'ny tahirin-tsakafo ara-barotra. ref Ny fanamafisana ny ranomasim-be dia misy fiantraikany amin'ny rafitra sy ny vokatra azo avy amin'ny famokarana bentika fototra sy faharoa, izay mety hisy fiantraikany amin'ny vokatra azo avy amin'ny fiompiana trondro sy ny haavom-bary ambony. Ohatra, jono mitranga amin'ny pteropods, karazana zooplankton izay tena malemy loatra amin'ny fananganana ranomasina. Ankoatra izany, ny fifandraisana amin'ny fanasiana amin'ny fandeferana thermele dia mety hisy fiantraikany eo amin'ny sehatr'ireo karazan-trondro maro karazana.
Ny fikarohana siantifika dia mampiseho ny vulnerabilita sy ny fahatsapana ny karazana an-dranomasina ara-barotra sy ara-tontolo iainana
Ny fanamafisana ny ranomasina any amin'ny ambaratonga avo indrindra amin'ny CO2. Loharano: IGBP, IOC, SCOR 2013
Ny fihenan'ny trondro be dia be sy ny fiovana amin'ny sehatry ny sakafo an-dranomasina dia manohintohina ny famatsian-tsakafo sy ny sakafo ara-tsakafo an-tapitrisany, ary koa ny indostrian'ny mpanjono marobe.
Marine ecosystem sakafo ara-tsakafo. Izany dia mampiseho ny fifandraisana misy eo aminy na ny tontolo iainana eo anelanelan'ny karazan-tsakafo misy ny fiarahamonina; Ny zana-tsipìka dia mandeha any amin'ny biby mpihaza. Miorina amin'ny tranokala an-dranomasina. Loharano: Polovina 1984
Fiaraha-monina Coastal sy Toe-karena
Ny fanamafisana ny ranomasina dia mety hitarika ny fiarahamonina sy ny toekarena amoron-dranomasina. Ny vatoharan-dranomasina dia manome toerana ho an'ny trondro, mamokatra vola an'arivony tapitrisa amin'ny fizahan-tany, miaro ny kirany avy amin'ny fanodinana sy tondra-drano, ary manome ny fototra ho an'ny biodiversité. Ho an'ny vondrom-piarahamonina maro, ny fandrosoana ara-toekarena dia miankina amin'ny fizahan-tany amoron-dranomasina Ny haran-dranomasina voajanahary dia miteraka dolara mpizahatany ary manome fiarovana amoron-dranomasina ho an'ny fotodrafitrasa (toy ny hotely sy toeram-ponenana).
Fiantraikany amin'ny fiovan'ny toetrandro
Ny fanamafisana ny ranomasimbe, miaraka amin'ny rano ambonin'ny rano miakatra sy ny fiovan'ny ranomasina mifangaro, dia mety hampidina ny fahafahan'ny ranomasimbe hiasa amin'ny gazy karbonika (CO2). Izany dia miteraka CO bebe kokoa2 ao amin'ny atmosfera. Satria CO2 dia ny gazy voajanahary voalohany mitondra amin'ny fiovan'ny toetr'andro, ny fiakaran'ny CO2 dia manampy amin'ny fitomboan'ny hafanana maneran-tany sy ny fiovan'ny fiovaovan'ny ranomasina, ny oram-baratra, ary ny halatra. Rehefa ny fahaizan'ny ranomasina haka CO2 dia mihena, ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetrandro dia mety ho mafy kokoa. Ity fihenam-bidy ity koa dia mahatonga azy ho sarotra sy lafo kokoa amin'ny fampihenana ny CO atmosfera2 concentrations.
NOAA Fandaharan'asa fanararaotana ny ranomasina: Ny fiantraikan'ny fiarahamonina sy ny fampandrosoana ny fiarahamonina
Fihetseham-po ho an'ny ranomasim-be momba ny ranomasim-be ho an'ny mpanao politika - fizarana fahatelony amin'ny Ranomasimbe Indianina any amin'ny Tendrombohitra High-CO2